Mgbanwe Dijitalụ: Mgbe CMOs na CIOs jikọrọ aka, Onye ọ bụla nwere mmeri | Martech Zone
Mgbanwe dijitalụ mere ngwa ngwa na 2020 n'ihi na ọ ghaghị. Ọrịa ahụ mere ka usoro mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị mkpa ma weghachite nyocha ngwaahịa na ịzụrụ maka azụmaahịa na ndị ahịa.
A manyere ụlọ ọrụ ndị na-enweghị ọnụnọ dijitalụ siri ike ịmalite otu ngwa ngwa, ndị isi azụmaahịa kwagara ka ha nwee ike ịnweta iyi data mmekọrịta mmekọrịta nke emepụtara. Nke a bụ eziokwu na oghere B2B na B2C:
Ọrịa ahụ nwere ike ịnwe ngwa ngwa mgbanwe mgbanwe dijitalụ ngwa ngwa site na afọ isii.
Ọtụtụ ngalaba azụmaahịa ewerela mmefu ego, mana itinye ego na ngwaahịa martech ka siri ike:
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70% bu n'obi ịbawanye mmefu ego na ọnwa 12 na-esote.
Gartner 2020 CMO Na-emefu Nchọpụta
Ọ bụrụ na anyị nọ na afọ dijitalụ tupu COVID-19, anyị nọ ugbu a na hyper-digital age. Ọ bụ ya mere o ji dị oke mkpa na CMOs na CIO na-arụkọ ọrụ ọnụ na-abanye na 2021. CMOs na CIO ga-adị mkpa ka ha gbakọta iji nyefee ahụmịhe ndị ahịa ka mma, na-eme ka ihe ngosi martech dị ọhụrụ site na iwebata, ma melite arụmọrụ.
Imekọrịta ihe ọnụ iji nyefee Ahụmịhe Ndị Ka Mma
CIOs na CMO anaghị arụkọ ọrụ mgbe niile na ntinye - IT bụ ezigbo okwu. Ma ndị isi ngalaba abụọ ahụ lekwasịrị anya na ndị ahịa. CIO mepụtara akụrụngwa nke ịzụ ahịa na usoro azụmaahịa ndị ọzọ na-eji erute ma na-ejere ndị ahịa ozi nke ọma na nke ọma. Ndị CMO na-eji akụrụngwa iji mepụta profaịlụ ndị ahịa ma mepụta mkpọsa ahịa.
Ọ bụrụ na ndị CMO na-arụ ọrụ na CIO iji mee mkpebi banyere ntinye nke Martech na ịzụrụ ihe ngwọta igwe ojii, ha nwere ike melite ahụmịhe ndị ahịa site na data dịwanye mma na ntinye ngwa, nke bụ maka ọdịmma onye ọ bụla. Dika otutu ndi mmadu n’enwe ulo oru site na uzo dijitalụ, mkpa ndi ahia n’inwe ozi banyere ha, ihe omumu di nkpa karie oge obula, na mmekorita CMO-CIO bu isi.
Enwekwara akụkụ ego maka ikpe maka nnukwu nkwado CMO-CIO.
44% nke ụlọ ọrụ kwenyere na ọrụ kachasị mma n'etiti CMO na CIO nwere ike ịkwalite uru.
Ndị isi nke ngalaba azụmaahịa na IT bụ ndị bute ụzọ na mgbanwo hyper-digital, yabụ ihe ịga nke ọma na mba ụwa na-ebute ọrịa na-adabere na ikike ha ịrụkọ ọrụ ọnụ.
Njikọ maka Innovation MarTech
Ọtụtụ CMO ndị nọ n'ọgba aghara ịzụrụ ihe iji kwado mgbasa ozi dijitalụ gbasaa kpebiri ịghara ịkpọtụrụ CIO ha tupu ịzụta teknụzụ. O nwere ike ịbụ n'ihi na ha na-echegbu onwe ha banyere igbu oge mgbe ha chọrọ otu isi okwu edozi ngwa ngwa iji mezue ụzọ. Ma obu ikekwe ha echeghi na o di nkpa ichikota ma ha achoghi echiche nke abuo banyere ihe ha mere.
Mana ilele ntinye CIO ka ịbata na mpụga bụ mmeghe. Nke bu eziokwu bu, CIO bu ndi okacha amara na ichikota data, nka ndi CMO choro mgbe ha na ewegharia uzo ohuru. Ndị CMO nwere ike ịmalite iwulite mmekọrịta dị mma, na-arụpụta ọrụ na CIO site na ịgbatị tupu ha azachachaa azịza ahịa, na-elebara ndụmọdụ ahụ anya dịka mmekorita.
Njikọ ọnụ na-ebu ụzọ na-esote ọhụụ ọhụrụ martech, yabụ nke a bụ oge kwesịrị ekwesị iji mee ka mmekọrịta CMO-CIO sikwuo ike. Ọrụ ndị bụ isi na-arụ ọtụtụ ihe ngwọta martech na-agụnyekarị enweghị ike ijikwa nhazi dị elu, yabụ ndị CMO ga-achọ nnabata njikọta na ọ nwere ike ọ gaghị enwe ụlọ, ndị na-enye nsogbu nwere ike inye aka.
Ihe akaebe: Olee otu ntinye data n'ime CRM si arụ ọrụ ugbu a
Imirikiti ndị na-ere ahịa B2B nwere ihe akaebe na-egosi mkpa ọ dị ijikọ data yana ikike ya iji melite arụmọrụ na ịme ihe ọhụụ. Ndị ahịa B2B gbakwunyere CRM nke ụlọ ọrụ ha na ngwugwu ngwugwu ahịa nwere ike ịmepụta akụkọ site na iji data nke onye ọ bụla nwere ike ikwenye, site na ndị ọrụ ibe ya na kọmitii na ndị isi.
Ndị na-ere ahịa na-eji usoro ihe eji eme ihe, nsuso na nlekota na-eduga n'ime CRM, nwere ike melite arụmọrụ site na ịchọpụta na ịhazi usoro usoro. Ndị na-ere ahịa nwere ngwaọrụ iji kọwaa ego ha nwere maka mkpọsa site na iji data CRM nwere ike itinye ego nke ọma site na ị na-ekenye dollar mmefu maka mkpọsa na-eweta nloghachi kachasị mma.
Site na nkwado mwekota site na IT, CMO nwere ike ilekọta ọrụ iji mepụta arụmọrụ arụmọrụ karịa, gụnyere akpaaka na teknụzụ ndị ọzọ na-eweta teknụzụ. Site na isoro CIO rụọ ọrụ nke ọma, CMO nwere ike nweta nkwado na nka ha chọrọ iji bulie ohere nke akpaaka.
CMOs Pụrụ Takezọ Nzọụkwụ Mbụ
Ọ bụrụ na ị dị njikere iwulite mmekọrịta chiri anya na ụlọ ọrụ gị CIO, ị nwere ike ịme ihe mbụ site na ịmepụta mmetụta ọmịiko na ntụkwasị obi, dịka ị ga-amalite mmekọrịta azụmahịa ọ bụla. Kpọọ CIO ka ị nwee iko kọfị na nkata na-enweghị nkata. Enwere ọtụtụ ihe ị ga-atụle ebe ọ bụ na azịza nke azịza ga-agbanwe ma na-aghọwanye ọkaibe.
You nwere ike ikwu maka ụzọ esi arụkọ ọrụ ọnụ iji meziwanye ahụmịhe ndị ahịa, na-eme ka ihe ọhụrụ mepụta ma melite arụmọrụ. Nwere ike inyocha ụzọ ọhụụ nke imekọ ihe ọnụ, ha niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka abamuru nke ụlọ ọrụ na ndị ahịa ya. Mgbe CMOs na CIO gbakọtara, onye ọ bụla na-enweta mmeri.
Tags: b2ccioKedumezie ihentinye datamgbanwe ntanetịusoro ihe omimigartnermwekotaedu ọgbọndu nurturingndu nduakụrụngwa ahịankataọrịaTwilio
Bonnie Crater bụ onye isi ala na onye isi oche nke Ihe omuma zuru ezu. Tupu isonye na Full Circle Insights, Bonnie Crater bụ osote onye isi ahịa maka VoiceObjects na Realization. Bonnie jidere onye isi oche na onye isi oche ndị isi na Genesys, Netscape, Network Computer Inc., salesforce.com, na Stratify. Otu onye agha nke afọ iri nke Oracle Corporation na ndị enyemaka ya dị iche iche, Bonnie bụ osote onye isi ala, Compaq Products Division na osote onye isi oche, Workgroup Products Division.